ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ Delivery နာရီ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဝန်ဆောင်မှုနာရီဥရောပ, အမေရိကန်, ဟောင်ကောင်နှင့်စင်္ကာပူရှိစတိုးဆိုင်များတွင်နာရီကိုဝယ်သည်န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ဝယ်ယူမှုသာထုတ်လုပ်သူကနေလူသိများအွန်လိုင်းစတိုး, ဖက်ရှင်ဆိုင်များသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်လုပ်နေကြသည်။
ရုရှားတွင် 15.000 ရူဘယ်အထိတန်ဖိုးရှိကုန်ပစ္စည်းများများအတွက်ငွေပေးချေမှုရမည့်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းအပေါ်သို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ စျေးကြီးထုတ်ကုန်များ 15.000r ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်အပြည့်အဝကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်းအားဖြင့်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏။
သင်္ဘောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ SDEK ။ 100% ကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်း။
ထုတ်ကုန်များဖြန့်ဝေကပိုစျေးကြီး $ 1500 ဖြစ်ပါသည်
Delivery စျေးကြီးထုတ်ကုန်သာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သားအားဖြင့်အထဲကယူသွားတတ်၏။ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်တစ်ဦးအပိုဆောင်းလေကြောင်းဆက်သားကိုသတ်မှတ်နိုင်စွမ်း၏ကုန်ကျစရိတ်။
သငျသညျ 7500 ယူရိုမှတက်ရကျိုးနပ်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများအမိန့်ပေးနိုင်သည်။ 7500 ယူရိုပိုပြီးစျေးကြီးထုတ်ကုန်ဓလေ့ကန့်သတ်, သို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏တန်ဖိုး၏ 30% အထိပမာဏအကောက်ခွန်လုပ်ငန်းတာဝန်များ၏ငွေပေးချေမှုမှဘာသာရပ်နှင့် ဆက်စပ်. ရုရှားမဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပြည်နယ်များ၏အကောက်ခွန်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီအခြားနိုင်ငံများသို့ဖြန့်ဝေ။
ဤဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုဂျာမဏီနှင့်အခြားဥရောပနိုင်ငံများရှိဟောင်ကောင်စတိုးဆိုင်များတွင်နာရီနှင့်အခြားထုတ်ကုန်ဝယ်ဖို့အဖြစ်အမေရိကန်နှင့်စင်္ကာပူနိုငျသညျ။ ရုရှားနှင့် CIS အတွက်ဝယ်မရနိုငျသောနာရီအပြင်, သငျသညျအမိန့်နိုင်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်မဆိုအခြားဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ။
သင်သည်သင်၏အလိုရှိသောထုတ်ကုန်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ catalog ထဲမှာရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါရှာတွေ့ဘူးဆိုရငျ, ကမ္ဘာပေါ်မှာအခြားစတိုးဆိုင်ကနေမှတစ်ဦး link ကိုပေးပို့နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏လိပ်စာဖို့ရေကြောင်းရေတွက် ..
သင်သည်မည်သည့်နောက်ထပ်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်သင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု predolzhenie ရှိပါက, info@watch-edition.ru မှာကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါလိုလျှင်